Adeegga Neefsi-caawiyeyaasha Bukaanka Covid-19 iyo Afrika Maxaa kala Haysta? | Aftahan News
Adeegga Neefsi-caawiyeyaasha Bukaanka Covid-19 iyo Afrika Maxaa kala Haysta?
Hargeysa(Aftahannews):- Hay’adda Caafimaadka Adduunka u qaabbilsan Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ee WHO warbixin ay soo saartay, waxay ku sheegtay in dhibaato kala haysato Afrika iyo adeegga la tacaalidda dadka uu ku dhaco xanuunka Covid-19.
Qalabka Neef-caawiyaha Bukaanka COVID-19 OO QOF XANUUNSAN KU RAKIBAN 2020.jpg
Waxay WHO warbixinteeda ku sheegtay in badi dalalka Afrika, halkii milyan ee qof ee kasta, qiyaastii shan keliya oo ah sariiraha adeegga gaarka ah (ICU) ay heli karaan, marka la barbardhigo illaa 4,000 oo sarriirood oo loo heli karo halkii milyan ee qof ee ku nool qaaradda Yurub, sida ay sheegtay WHO.
Agaasimaha Afrika ee hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, Dr Matshidiso Moeti, waxay sheegaysaa in adeegga Neefsi-caawiyaha (ventilators) bukaanku ay tahay “mid ka mid ah caqabadaha ugu waawayn ee ay dalalka Afrika waajahayaan” si ay ula tacaalaan cudurka.
Dr. Matshidiso Moeti waxay sheegtay inay ku dedaalayaan ‘ka-hor-tag’, maadaama aanay qaaraddu awood iyo xamil u lahayn marxalada ‘daawaynta’.
Warbixinta WHO waxa lagu sheegay in coronavirus uu ugu yaraan 300,000 qof ka galaafan doono Afrika, ku dhawaad 30 milyan oo kalena uu ku riixi doono dhinaca “godka saboolnimada”.
Ilaa hadda, qiyaastii 1,000 qof oo dhimasho ah ayay qaaraddu diiwaangelisay, iyadoo 20kun oo qofna uu ku dhacay guud ahaan dalalka Afrika. #COVID19 iyo Afrika maxaa kala haysta?
Waxa Turjumay Barkhad Daahir